बढी कर र धेरै चुहावट, आर्थिक विकासमा असर | गृहपृष्ठ
Home पाठक विचार बढी कर र धेरै चुहावट, आर्थिक विकासमा असर
on: ७ भाद्र २०७४, बुधबार १५:२६ पाठक विचार
बढी कर र धेरै चुहावट, आर्थिक विकासमा असर
जब मुलुक अविकसित हुन्छ, त्यहाँ सरकारको काम सर्वसाधारणलाई सुविधा सहुलियत दिएर मुलुकलाई निरन्तर विकास गर्दै लैजानु हो । यस्तो अवस्थामा सरकारले विकासका लागि दाताबाट आउने रकम, सर्वसाधारणबाट आउने कर र रेमिट्यान्स रकम आदिलाई माध्यम बनाइराखेको हुन्छ । तर, विडम्बना यो छ कि जतिसुकै रकम हाम्रो देशमा आइराखे पनि विकासले तीव्रता लिन सकेन । तर, यहाँ सरकारप्रति प्रतिकार गर्नेहरू ज्यादै कम छन् । अर्थात् कोही बोल्दैनन् कि । आखिर यत्रो रकमहरू किन फ्रिज भएर बसिराखेको हुन्छ ? जस्तै ठूलाठूला योजनाहरू कछुवा चालमा गइराखेको हुन्छ भने कयौं ठाउँ बजेट यतिकै फ्रिज भएको हामी पाउँछौं । यी कुराको राम्रो लेखाजोखा हुँदैन, जसको फाइदा सरकारी हाकिमहरूले उठाइराखेको हुन्छ ।
वास्तवमा भन्ने हो भने हाम्रो मुलुकमा विकासमा ढिलासुस्ती हुनुको कारण कमिशन तथा भागबण्डा सरकारी भत्ता, विदेश भ्रमण, औषधि उपचार, कार्यकर्ता पालन, अनावश्यक बढी कर्मचारी भर्तीजस्ता चुहावटका कारण विकासले मोड लिन नसकिराखेको मान्न सकिन्छ । त्यसकारण यस्तो अवस्थामा सरकारले सर्वसाधारणलाई करबाट मात्र सताउन हुँदैन । एउटा अचम्मको कुरा के छ भने प्रायः हिजो दरिद्र मानिएका मुलुकहरू पनि आज आएर धेरै विकास भइसकेका छन् । तर, हाम्रो मुलुकले भने विकासको कोल्टो फेर्न पाएका छैन । जहाँसम्म लाग्छ यसको खास कारण सधैं राजनीतिक कलह, भिजनको कमीलाई मान्न सकिन्छ । यी कुराबाहेक लालच र अटेरी संस्कार नै हाम्रो देश विकासको शत्रु हुन् कि जस्तो पनि लाग्छ । यदि यी कुरा झूटा हुन् भने हाम्रो देशमा विकासका लागि भगवान्कै आशीर्वाद नभएको हामीले ठान्नुपर्छ ।
यो मुलुकमा देश हाँक्नेहरूको कुरा एउटा हुन्छ काम एउटा हुन्छ, अखबार मिडियामा कुरा हर समय अर्ब खर्बको कुरा भइराखेको हुन्छ । तर, रोजगारका लागि भिखारीजस्तो यहाँका जनता विदेशीका शरणमा परिराखेको हुन्छ । बदलामा यहाँ कि नेता नेता मोटाइराखेका हुन्छन् या भने यिनीहरूका सरकारी हाकिम र कार्यकर्ताहरू मात्र मोटाइराखेका हुन्छन् । तापनि सर्वसाधारणहरू दालभातमा कोही भने वाइन, रक्सी, वियरमा रमाइराखेका हुन्छन् । एक अर्को पक्ष खाली नकारात्मक सोच र दोषारोपण गरिराखेका हुन्छन् । योबाहेक चम्बुहरू दुई नम्बरको रकममा रमाइराखेका हुन्छन् भने थाहा छैन यहाँ भएका बुद्धिजीवीहरू कुन दुनियाँमा हराइराखेका हुन्छन् । यो भने हाम्रो मुलुकमा बुद्धिजीवी भन्ने प्राणी नै नभएको हो कि ? तर, हरेक पक्ष अटेरी नभई सोच परिवर्तन नगरेर एकजुट हुने हो भने द्रुत विकास भनेको कुनै ठूलो कुरा होइन ।
सरकार अन्धाधुन्ध यहाँ करहरू लिन्छन् । तर, यहाँ सुख, सुविधा, सहुलियत पनि त उही हिसाबले सरकारले दिनुपर्ने होइन र खोइ त ? ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको’ आउने त हो नि कि कसो ? उदाहरणका लागि मानिसहरू गुणस्तर खाद्यान्न तथा सामान उपभोग गर्न सक्दैनन् । मानिसहरू बाटोमा राम्ररी हिँड्न सक्दैनन्, सवारी समस्या, यहाँसम्म कि सुविस्ता तथा मनोरञ्जनको नाममा पर्याप्त पार्कहरू छैनन् । वास्तवमा हाम्रो मुलुकमा लोकतन्त्र आएको पनि झण्डै ३ दशक हुन लागिसक्यो, यहाँ मुलुक विकास भइराखेको त देखिन्छ, तापनि यहाँ मानिस उकुस मुकुस हुन बाध्य छन् । यसका खास कारण अनावश्यक धेरै नेता, झूटा आश्वासन, असुविधा तथा धेरै करहरूले आम जनतालाई सताइराखेको हुन्छन्, तापनि नेताहरू कानमा तेल हालेर बसेका हुन्छन् । जसरी डिस्कोमा ठूलो आवाजमा नटुवाहरू नाचेर बसेका हुन्छन् । हाम्रोजस्तो मुलुकमा मुलुक हाँक्नेहरू नै एकोहोरो र अटेरी भएकाले विकास खासै नभएको मान्न सकिन्छ । यही कारणहरूले गर्दा पनि सर्वसाधारणहरू करदेखि टाढा रहन चाहन्छन् । तर, एक हिसाबले जनताबाट कर असल्न नसक्नु भनेको मुलुकका लागि नै हानि हो भनेर के गर्ने त आएका रकमहरू चुहावट मात्र बढी हुन्छ भने यहाँका सर्वसाधारणले पनि के गरोस् ।
बढी कर लिनु तर त्यसअनुसारको सुविधा नदिने सरकारको आदत नै भइसकेको छ । त्यसैगरी मानिसहरू खानपिउन र कमाउनमा मात्र भुल्ने तर समस्याका लागि कडा प्रतिकार नगर्ने संस्कार नै बसिसकेको छ । यस्तो बेलामा समाजलाई बदल्ने र मुलुकका लागि चमत्कार गर्छु भन्ने नेता कोही भएन ।
समग्रमा भन्नुपर्दा यो मुलुकमा अब आएर राम्रा युवा बुद्धिजीवीहरूको खाँचो छ । एउटा समय नै हो जसले युवा बुद्धिजीवी ल्याएर मुलुकको द्रुत विकास हुन सक्छ । तर, युवापुस्ताले जान्नु र सिक्नुपर्ने कुरा यिनीहरू लालच, स्वार्थ, दासप्रथा र गुटबन्दीलाई त्यागेर कडा भएर अघि बढ्नुपर्छ । अनिमात्र देशले छिटोभन्दा छिटो विकास गर्न सक्छ ।
छत्रपाटी, काठमाडौं ।